पियरे लोटी हिलबाट सुनौलो सीornका दृश्यहरू सबैलाई मन पराउँछन् RayHaber | raillynews
घरटर्कीMarmara क्षेत्र34 इस्तांबुलपियरे लोटी हिलबाट सबैको मन छुने गोल्डन हर्न दृश्य
13 / 05 / 2020 34 इस्तांबुल, साधारण, HEADLINE, Marmara क्षेत्र, टर्की, TELPHER
पियरे हिलबाट ह्यालिकको दृश्य सबैको लागि लोकप्रिय छ
जब तपाईं यी छेउछाउमा पुग्नुहुन्छ, जुन उत्तम क्षेत्र हो जहाँ तपाईं गोल्डेन सीornको त्यो प्रसिद्ध दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ; प्रख्यात फ्रान्सेली लेखक पियरे लोटीको नाममा कफी पुगेको छ। पियरे लोटीको वास्तविक नाम, जो लामो समयदेखि इस्तानबुलमा बस्दै छ र इस्टानबुलको साँचो प्रेमी हो, "जुलियन भियौड" हो। ऐतिहासिक कफी आदर्श स्थान हो जहाँ अनुपम दृश्य देख्न सकिन्छ। केबल कारबाट पहाडमा जान पनि सम्भव छ।
घाट लोटी पहाडको बारेमा
यो भनिन्छ कि पियरे लोटी, जसले यसलाई दोस्रो मातृभूमिको रूपमा देख्यो, यो कफीमा "राबिया महिला कफी" भनेर चिनिन्थ्यो र गोल्डन सीornको बिरूद्ध उनको उपन्यास "अजीयाडे" लेख्नुभयो। यो क्षेत्र, जहाँ मूल "तुर्की छिमेकी" पुनर्स्थापित गरिएको थियो र आज जीवित राखिएको छ, पर्यटक सुविधाहरूको रूपमा सेवा गर्ने स्थानहरू समावेश गर्दछ। यस क्षेत्रलाई इभिलिया इलेबीको यात्रा पुस्तक "इद्रिस हवेली प्रोमेनेड" को रूपमा मानिन्छ।
पियरे लोटी, जुन १ th औं शताब्दीमा इस्तानबुल आएका सबै विदेशी र यात्रुहरूको लागि लगातार गन्तव्य हो, यसका वरिपरिका धेरै ऐतिहासिक भवनहरू छन्। ती मध्ये एक काठको कागारी टेकेसी हो जसमा दुईवटा शिलालेख छन्, जुन १ 19१1813 मा मिति लेखिएको थियो। फेरी सुविधाको प्रवेशद्वारमा पर्सियामा लेखिएको सेतो गोलो चिहानको पत्थर ओलाक हसन टेक्केसी हो। Tekke को लाइन मा ऐतिहासिक इमारत चिकित्सा स्कूल एक स्कूल हो। १İ 1589 in मा मरेका मेस्कलेवीको चिहान मेक्तेबको ठीक अगाडि र सुविधा क्षेत्र भित्र अवस्थित छ जुन एड्रिस-बिट्लिसीले निर्माण गरेका थिए, जुन ओटोम्यानका ऐतिहासिक लेखक पनि हुन्। Nderस्केन्डर डेडेको अगाडि रहेको तीनवटा कुवाहरू मध्ये एक प्रसिद्ध Dilek (वा इरादा) राम्रो हो। यस राम्रोको सम्बन्धमा इभल्याया Çelebi Seyahatname; उनी लेख्छन् "राम्रोसँग हेर्नेहरूले आफ्नो कुवामा आफ्नो ईच्छा देख्छन्"। चिहानको माथिल्लो भागमा सारा “अताबşı (मिरहुर-टुइ जनरल) अली आआ र उनको परिवारको चिहानहरू छन्। थप रूपमा, "सारना", जुन बाइजान्टिन अवधिमा निर्माण गरिएको थियो र ओटोम्यान अवधिमा प्रयोग भएको थियो, यस सुविधाको केन्द्रमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्छ।
पियरे लोटी हिलमा कसरी पुग्ने?
यदि तपाईं आफ्नो गाडी संग जाँदै हुनुहुन्छ; पियरे लोटीको पछाडि सडक छ। यस तरिकाले, तपाईं पहाडमा जान सक्नुहुन्छ र त्यहाँ तपाईंको कार छोड्न सक्नुहुन्छ, कार पार्क छोड्दै ...
एनाटोलियन साइडबाट सवारी साधन बिना आउनेहरू सजिलैसँग एस्केडर - Eyüp पानी जहाजमा जान सक्छन्। तपाईं फेरी पोर्टबाट केबल कार लिएर पहाडमा जान सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं बस बाट आउँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईं पियरे लोती पुग्न र त्यहाँबाट केबल कार लिन आइप सुल्तान स्टपमा पुग्न आवश्यक छ।
तपाईं केबुल कार सवारी गर्न सक्नुहुनेछ पियरे लोटी हिलमा अकबिलको साथ ...
पियरे लोटी केबल कार भाडा
केबल कारबाट पियरे लोटी हिलमा पुग्न तपाईंले इस्तानबुल महानगरपालिकाको केबल कार लिनुहुनेछ। यसका लागि, तपाईं सामान्य संस्करणको रूपमा तपाईंको 'इस्टानबुल कार्ड' पढेर पास गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक संस्करणको लागि, नियमित कार्ड धारकहरूले २.2,60० भुक्तान गर्छन्। शिक्षकहरूले १.1,85 तिर्ने क्रममा विद्यार्थी टिकट मूल्य १.२1,25 छ।
अद्वितीय दृश्य संग पियरे ल्योति केबल कार छवियाँ
Olympos Teleferik आफ्नो अतिथिहरु को शानदार दृश्य (भिडियो) संग fascinates
पियरे लोटी र केबल कार (फोटो गैलरी - भिडियो)
आइपप-पियरे लोटी-मिनीटर्क केबल कार प्रणाली
Eyüp - पियरे लोटी - Miniatürk रोपवे प्रणाली परियोजना पूर्व चयन ...
आइपप-पिएर ल्योटि-मिनीटर्क केबल कार लाइनमा निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ
Eyup र Pierre Loti बीचको केबल कार Miniaturk मा विस्तार हुनेछ
पियरे लोटी-मिनीटर्क केबल कार लाइन विकास योजना लटकाउँछ
आइपप-पियरे लोटी-मिनीटर्क केबल कार सुविधा
निविदा घोषणा: Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk केबल कार प्रणाली
पियरे लोटी को हो?
इस्तांबुल, हेलिक मेट्रो पास ब्रिज विश्व विरासत सूची को कारण
एक्रेम İmamoğlu: 'गोल्डन हर्नको मड सुक्नेछ, तेस्रो अहमत फव्वाराबाट पानी बग्नेछ'
ऐतिहासिक वेडा ब्रिज दृश्य
रबिया महिला कफी
कोरोनरी भाइरस उपाय गाइड सेक्टर द्वारा प्रकाशित
अंकारा दृश्यको साथ 1TL Keçiören केबल कार संग
रेलवे कलाकारहरू जादूगर छन्
डिजिटल कृषि बजारले सबैलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ